shwekayin – Page2– Myanmar Latest News
ၿမိဳ့ထဲမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံေနတာကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ၿပီး အလြဓာတၸဳံရိုကၠဴးခဲ့တဲ့ မိန္းကေလး
August 3, 2021 shwekayin Comments0Comment
လူအတော်များများက မိုးကြီးရေလျှံရင် အခက်အခဲအတော်များများနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ ယခုဖော်ပြမဲ့ ကောင်မလေးကတော့ အခက်အခဲမရှိ အပျော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနေခဲ့ပါတယ် ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ Panta မြို့မှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ Aditi Singh အမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းသူဟာ ‘ Mermaid in Disaster’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိုးကြီးရေလျှံနေချိန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Instagram မှာ ဝေမျှခဲ့တာပါ ။ အချို့သော ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဆိုရင် သစ်ပင်ကျိုးကျတဲ့အထိ ဖြစ်နေခဲ့လို့ လူအတော်များများက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို သူမက ပျက်ရယ်ပြုနေတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အချို့ကလည်း အခက်အခဲတွေကြားထဲက ပျော်ရွှင်မှုလေးဖြစ်စေတဲ့ သူမရဲ့ပုံစံကို အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ် ။ သူမကတော့ ‘ ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေက လက်ရှိ Patna မြို့ရဲ့ အခြေအနေကိုပြသနေတာပါ ၊ တစ်လွဲမတွေးကြပါနဲ့ ‘ ဆိုပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ မကြာခဏရေကြီးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သူမရဲ့မြို့လေးကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုပြီး ဖော်ပြမေးမြန်းခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် ။ . . . . Jasmine (KBdailynews) Reference : rachfeed Zawgyi လူအေတာ္မ်ားမ်ားက…
ခ်စ္သူေကာင္မေလးဝမ္းမနည္းေအာင္ Facebook friend list ထဲရွိမိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သူ႔ကို unfriend လုပ္ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
Facebook ပေါ်မှာ social media ရဲ့သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်း သင်ဟာ မည်သူနှင့်မဆို ၊လူတိုင်းနီးပါးနှင့် Friend သွား Ask လို့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူကို ပျော်ရွှင်စေလိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ သူ့ရဲ့Facebook ထဲက Friend ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းများထံသို့ သူ့အား unfriend လုပ်ရန် message များပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ JM Prudente အမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားက သူ့ရဲ့ မိန်းကလေးFB သူငယ်ချင်းများကို သူ့အား “ unfriend” လုပ်ပေးဖို့ ရေးသားခဲ့ပြီး သူက free data သာ သုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် သူကိုယ်တိုင် မunနိုင်ကြောင်းကိုပါ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင် JM က သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ handsome ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားကာ သူ့ရဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများကို သူ့အား un ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြောင့် Facebook ရှိသူ့ရဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများအား အရင် unfriend လုပ်ခိုင်းစေလိုကြောင်းပါ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ Jahz Navarra က JMရဲ့အခြား Facebook user နှင့်စကားပြောနေတဲ့ conversation တစ်ခုရဲ့ screenshot ကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပြီးနောက် JMရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ရပါတယ်။Navarra က “…
မွေးရပ်မြေ မြစ်ကြီးနားက ပြည်သူတွေအတွက် အုန်းထမင်းနဲ့ ကြက်ကြော်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အမွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်အမွန်းကတော့လတ်တလောမှာနေမကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကြက်ပေါင်းတွေလည်းလှူဒါန်းပေးခဲ့သလိုသူရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့မြစ်ကြီးနားကပြည်သူတွေအတွက်လည်းကြက်ဥနဲ့ကြက်ပေါင်းတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ဒီနေ့မှာလည်းအမွန်းကထပ်ပြီးလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့အမွန်းကမွေးရပ်မြေမြစ်ကြီးနားမှာရှိတဲ့နေမကောင်းကြတဲ့သူတွေအတွက်အုန်းထမင်းနဲ့ကြက်ကြော်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောက်(၁၀၀)စာအတွက်ပွဲရေ(၁၀၀)တိတိကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမွန်းကတော့ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလှူနိုင်တဲ့အတွက်လည်းအခုလိုလှူဒါန်းနိုင်အောင်အစအဆုံးစီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါသေးတယ်။ သူလှူဒါန်းပေးတဲ့အုန်းထမင်းနဲ့ကြက်ကြော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်လည်းလှူဒါန်းရတာကိုအမွန်းကပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleZoneပရိသတ်ကြီးရေအမွန်းရဲ့အုန်းထမင်းနဲ့ကြက်ကြော်လှူဒါန်းတဲ့အလှူလေးကိုပရိသတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့CeleZone ကနေမျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။CeleZoneပရိသတ်ကြီးတွေကသာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source – Ah Moon -Zawgyi Fontဖြင့်ဖတ်ရန်- ေမြးရပ္ေျမ ျျမစ္ႀကီးနားကျပည္သူေတြအတြက္အုန္းထမင္းနဲ႔ၾကက္ေၾကာ္ေတြလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့အမြန္း ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္အမြန္းကေတာ့ လတ္တေလာမွာေနမေကာင္းတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ၾကက္ေပါင္းေတြလည္း လႉဒါန္းေပးခဲ့သလို သူရဲ႕ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ ျမစ္ႀကီးနားက ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္ေပါင္းေတြလႉဒါန္းေပးခဲ့တာပရိသတ္ေတြသိရွိၿပီးသားျဖစ္မွာပါေနာ္။ ဒီေန႔မွာလည္း အမြန္းကထပ္ၿပီးလႉဒါန္းေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ အမြန္းက ေမြးရပ္ေျမျမစ္ႀကီးနားမွာရွိတဲ့ ေနမေကာင္းၾကတဲ့သူေတြအတြက္ အုန္းထမင္းနဲ႔ ၾကက္ေၾကာ္ ေတြလႉဒါန္းေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတတ္ႏိုင္သေလာက္လႉဒါန္းေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေယာက္(၁၀၀)စာအတြက္ ပြဲေရ(၁၀၀)တိတိကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမြန္းကေတာ့ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္မလႉႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း အခုလို လႉဒါန္းႏိုင္ေအာင္ အစအဆုံးစီစဥ္ေပးတဲ့သူေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းသူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန မွ်ေဝေဖာ္ျပထားခဲ့ပါေသးတယ္။ သူလႉဒါန္းေပးတဲ့အုန္းထမင္းနဲ႔ၾကက္ေၾကာ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့အတြက္လည္းလႉဒါန္းရတာကိုအမြန္းကပီတိျဖစ္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ CeleZoneပရိသတ္ႀကီးေရအမြန္းရဲ႕အုန္းထမင္းနဲ႔ၾကက္ေၾကာ္လႉဒါန္းတဲ့အလႉေလးကိုပရိသတ္ေတြသာဓုေခၚဆိုႏိုင္ဖို႔CeleZoneကေန မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။CeleZoneပရိသတ္ႀကီးေတြက သာဓုေခၚဆိုေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ Source – Ah Moon
အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ခ်စ္သူရဲရင့္ေအာင္နဲ႕ေလးႏွစ္ေက်ာ္တြဲလာခဲ့ၿပီး ဒီကေန႕မွာမၿပီးတိုင္လမ္းခြဲလိုက္ေၾကာင္း ပရိတ္သတ္ကို အသိေပးလိုက္တဲ့ ဧၿငိမ္းျဖဴ
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ​ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ဧၿငိမ္းျဖဴဟာဆိုရင္ပရိသတ္ေတြရဲ့ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုအျပည့္အဝရရွိထားသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာစီးပြားေရးေရာ၊​ေမာ္ဒယ္ေရာ၊သ႐ုပ္ေဆာင္ကိုပါလုပ္ေဆာင္ေနသူေလးျဖစ္ပါတယ္။ဧၿငိမ္းျဖဴကိုမ်က္ႏွာရွည္ရွည္သြယ္သြယ္ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္ေလးမို႔သူ႔ရဲ့ပရိသတ္ေတြကထိုင္းမင္းသမီးေလးနဲ႔တူတယ္လို႔​ေညပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ဧျငိမ္းျဖဴကျမန္မာဝတ္စုံဖက္ရွင္ေလးေတြကိုလည္းအျမတ္တနိုးဝတ္ဆင္ေလ့ပါတယ္။သူမကိုအဆိုေတာ္ရဲရင့္ေအာင္ရဲ့ခ်စ္သူအျဖစ္လည္းလူသိမ်ားပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ဧၿငိမ္းျဖဴကေလးႏွစ္ေက်ာ္တြဲလာခဲ့တဲ့ခ်စ္သူအဆိုေတာ္ရဲရင့္ေအာင္နဲ႔လမ္းခြဲလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းပရိတ္သတ္ကိုတရားဝင္ေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဧၿငိ္းျဖဴက“သေလာက္ေအာင္ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့သူမို႔လမ္းခြဲတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ​ေသေလာက္ေအာင္နာက်င္ရပါတယ္Aသူ႔ကိုဘယ္ေလာက္နာက်ည္းေနပါေစဒါေပမဲ့Aတို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုအျခားသူေတြအျမင္မွာ​ေကာင္းေသာအမွတ္တရေလးေတြနဲ႔ပဲက်န္ခဲ့ေစခ်င္လို႔ပါ အဲ့ေၾကာင့္Aဒီလမ္းခြဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေနာက္ထပ္ဘာမွထပ္ေျပာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္​ေလးႏွစ္ေက်ာ္လုံးဘယ္ေတာ့မွလႊတ္မခ်နိုင္ခဲ့ပဲမရရေအာင္ဆုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့လက္တစ္စုံေနာက္ဆုံးေတာ့လႊတ္ခ်နိုင္ခဲ့ပါၿပီအျခားသူအတြက္ေပးဆပ္ရင္းကိုယ့္အတြက္ကိုယ္အသက္ရႈဖို႔ေတာင္ေမ့ေနခဲ့တဲ့သူမို႔​ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ဘဝမွာကိုယ့္ကိုကိုယ္အမ်ားႀကီးျပန္ၾကည့္ေပးၿပီး ႀကိဳးစားေနထိုင္သြားမွာပါဒီကာလႀကီးမွာဒီလိုကိစၥမ်ိဳးအသိေပးရတဲ့အတြက္လည္းတကယ္​ေတာင္းပန္ပါတယ္။”ဆိုၿပီးသူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေနေျပာျပလာခဲံတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။အရမ္းကိုခ်စ္ခဲ့ၾကတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ဦးအခုလိုလမ္းခြဲလိုက္ေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြကမ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္နတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။ Source ; A Nyein Phyu Facebook Acc Credit ; M. M. H ပရိတ်သတ်ကြီးရေမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ဧငြိမ်းဖြူဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစီးပွားရေးရော၊မော်ဒယ်ရော၊သရုပ်ဆောင်ကိုပါ လုပ်ဆောင်နေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဧငြိမ်းဖြူကိုမျက်နှာရှည်ရှည်သွယ်သွယ်ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေးမို့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကထိုင်းမင်းသမီးလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ဧငြိမ်းဖြူကမြန်မာဝတ်စုံဖက်ရှင်လေးတွေကိုလည်းအမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်လေ့ပါတယ်။သူမကိုအဆိုတော်ရဲရင့်အောင်ရဲ့ချစ်သူအဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ဧငြိမ်းဖြူကလေးနှစ်ကျော်တွဲလာခဲ့တဲ့ချစ်သူ အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပရိတ်သတ်ကို တရားဝင်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဧငြိ်းဖြူက“သလောက်အောင်ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူမို့လမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာလဲသေလောက်အောင်နာကျင်ရပါတယ်Aသူ့ကိုဘယ်လောက်နာကျည်းနေပါစေဒါပေမဲ့ A တို့နှစ်ယောက်ကိုအခြားသူတွေအမြင်မှာကောင်းသော အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ပဲကျန်ခဲ့စေချင်လို့ပါ အဲ့ကြောင့် A ဒီလမ်းခွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးနောက်ထပ် ဘာမှထပ်ပြောတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်​လေးနှစ်ကျော်လုံး ဘယ်တော့မှ လွှတ်မချနိုင်ခဲ့ပဲမရရအောင် ဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လက်တစ်စုံနောက်ဆုံးတော့ လွှတ်ချနိုင်ခဲ့ပါပြီအခြားသူအတွက်ပေးဆပ်ရင်း ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့နေခဲ့တဲ့သူမို့ ရှေ့ဆက်ရမဲ့ ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အများကြီးပြန်ကြည့်ပေးပြီး ကြိုးစားနေထိုင်သွားမှာပါဒီကာလကြီးမှာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးအသိပေးရတဲ့အတွက်လည်းတကယ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေပြောပြလာခဲံတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး အခုလိုလမ်းခွဲလိုက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေကများစွာစိတ်မကောင်းဖြဟ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်။ Source ; A Nyein Phyu Facebook Acc Credit ;M. M. H
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဝါရင့်ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဦးစံမတူ ဆုံးပါးကွယ်လွန်
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဝါရင့်ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစံမတူကတော့ဒီနေ့သြဂုတ်လ(၃)ရက်နေ့မှာဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ။ ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့ဦးစံမတူဟာအသက်(၉၀)အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ အခုလိုဦးစံမတူတစ်ယောက်ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်းလေးကိုရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကောင်းကျော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ“ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဝါရင့် ဟာသသရုပ်ဆောင်ဦးစံမတူကွယ်လွန်သွားပြန်ပါပြီဗျာ”ပရိသတ်တွေကိုအခုလိုပဲအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးစံမတူတစ်ယောက်ကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်ရှိစေဖို့လည်းဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်းဦးစံမတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေရယ် အခုလိုဝါရင့်အနုပညာရှင်တွေကြွေလွှင့်သွားတဲ့အတွက်နှမြောတသသဖြစ်ရကြောင်းလည်းမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုနေပြီးကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်ရှိနေဖို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနေကြပါသေးတယ်။ CeleZoneပရိသတ်ကြီးတွေကိုလည်းဦးစံမတူကွယ်လွန်တဲ့ သတင်းလေးကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲမျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Source – U Kaung Kyaw -Zawgyi Fontဖြင့်ဖတ်ရန်- ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဝါရင့္ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးစံမတူဆုံးပါးကြယ္လြန္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဝါရင့္ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဦးစံမတူကေတာ့ဒီေန႔ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔မွာဆုံးပါးကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ပရိသတ္ႀကီးေရ။ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ဦးစံမတူဟာအသက္(၉၀)အ႐ြယ္ကိုေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ အခုလို ဦးစံမတူတစ္ေယာက္ ဆုံးပါးသြားတဲ့ သတင္းေလးကို ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးေကာင္းေက်ာ္က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန “႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယို ဝါရင့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးစံမတူ ကြယ္လြန္သြားျပန္ပါၿပီဗ်ာ” ပရိသတ္ေတြကို အခုလိုပဲအသိေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစံမတူတစ္ေယာက္ေကာင္းရာဘုံဘဝကို ေရာက္ရွိေစဖို႔လည္း ဆုေတာင္းေပးထားပါေသးတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ဦးစံမတူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေတြရယ္ အခုလို ဝါရင့္အႏုပညာရွင္ေတြေႂကြလႊင့္သြားတဲ့ အတြက္ ႏွေျမာတသသျဖစ္ရေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုေနၿပီး ေကာင္းရာဘုံဘဝကို ေရာက္ရွိေနဖို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးေနၾကပါေသးတယ္။ CeleZone ပရိသတ္ႀကီးေတြကိုလည္း ဦးစံမတူကြယ္လြန္တဲ့ သတင္းေလးကို စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲမွ်ေဝေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ Source – U Kaung Kyaw
ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ႐ုပ္အေလာင္းေပါင္း၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္ ေပးခဲ့ရ
ရန္ကုန္ၿမိဳ့က သုသာန္ႀကီးေလးခုမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါနဲ႔ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၇,၇၁၅‌ေလာင္းကို ႏွစ္ပတ္အတြင္း မီးသၿဂႋဳဟ္ ေပးခဲ့ရတယ္လို့ မဇၩိမကလက္ခံရရွိထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္နဲ႔ စတုတၳပတ္အတြင္းမွာ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို မီးသၿဂႋဳဟ္ ေပးခဲ့ရတာပါ။ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီရဲ့ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္တဲ့ အားကစားႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူစာရင္း‌ေတြကို ညစဥ္ ည၈နာရီအခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ဇူလိုင္ ၃၁ တစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ ေသဆုံးသူ အေရအတြက္ ၃၉၇ ဦးနဲ႔ အမ်ားဆုံး ေသဆုံးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို့ ေၾကညာသြားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီရဲ့ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အ‌ေရအတြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ-၁၀ ရက္မွာ ၇၁ ဦး၊ ၁၁ ရက္မွာ ၈၂ ဦး၊ ၁၂ ရက္မွာ ၈၉ဦး ၊ ၁၃ ရက္မွာ ၁၀၉ဦး၊ ၁၄ ရက္မွာ ၁၄၅ ဦး၊ ၅ ရက္မွာ ၁၆၅ ဦး၊ ၁၆ ရက္မွာ ၁၉၀ဦး၊ ၁၇ ရက္မွာ ၂၃၃ဦး ၊ ၁၈ ရက္မွာ…
စားသောက်ကုန်တွေ ငွေ၁ဝဝနဲ့ရောင်းချတဲ့အဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာက တားမြစ်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရောင်းချပေး
စားသောက်ကုန်တွေ ငွေ၁ဝဝနဲ့ရောင်းချတဲ့အဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာက တားမြစ်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရောင်းချပေး ရန်ကုန်၊သြဂုတ် ၃-၂၀၂၁ KK(VOM) စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း(၄)မျိုးကို ငွေ၁ဝဝနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ MazelyFannelအဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာကနေ လူစုလူဝေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီး တားမြစ်တဲ့အတွက် ဒီကနေ့မှာ အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံရောင်းချပေးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ဆန်၊ဆီ၊ကြက်ဥ၊ကြက်သွန်နီ ကုန်ပစွည်း(၄)မျိုးကို ငွေ၁ဝဝနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့ အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက VOMကိုပြောပါတယ်။ “လှိုင်မှာရောင်းတုန်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေထက်များတယ်ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာကလာတားတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ရောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်လိုက်တာ”လို့ သူကရှင်းပြပါတယ်။ တောင်ဒဂုံရှိ သစ်ဆိမ့်ရပ်ကွက်၊၆၅ရပ်ကွက်၊၁ဝရရပ်ကွက်အပါအဝင် ရပ်ကွက်အချို့ရှိ အိမ်ထောင်စု ၃ဝဝကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။Mazely Flannel အဖွဲ့က ပြည်သူတစ်ဦးလျှင် ဆန်တစ်ပြည်၊ ဆီ ငါးဆယ်ကျပ်သား၊ကြက်ဥဆယ်လုံး၊ကြက်သွန်နီငါးဆယ်သားကို ငွေတစ်ရာကျပ်နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၁ရက်က လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေ သုံးရာနီးပါးကိုရောင်းချခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ နောက်ရက်တွေမှာလည်း သာကေတ၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊ဒလတို့မှယ ထပ်မံလှူဒါန်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ voiceofmyanamr စားေသာက္ကုန္ေတြ ေငြ၁၀၀နဲ႔ေရာင္းခ်တဲ့အဖြဲ႕ကို သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္တဲ့အတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရာင္းခ်ေပး ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္ ၃-၂၀၂၁ KK(VOM) စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း(၄)မ်ိဳးကို ေငြ၁၀၀နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ MazelyFannelအဖြဲ႕ကို သက္ဆိုင္ရာကေန လူစုလူေဝးျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး တားျမစ္တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔မွာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာ…
ေမြးကင္းစသားဦးေလးကို ပထမဆုံးႏွင့္ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရင္ခြင္ထဲေပြ႕ဖက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာဘဲ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ ဖခင္တစ္ဦး
အချို့သောခင်ပွန်းတွေဟာ ဇနီးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာဘဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကို တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ။မီးဖွားနေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့အနားမှာ ကလေးလေးရဲ့အဖေကရှိမနေဘဲ သားအမိသာကျန်ရှိနေရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ရဲ့နာကျင်ခံစားမှုကို မြင်ယောင်ကြည့်ရင် ကိုယ်ပါလိုက်နာကျင်နေရပါလိမ့်မယ်။အခုလည်း မသေခင်တစ်ရက်အလိုမှာ ၎င်းတို့ရဲ့မွေးကင်းသကလေးလေးကို ပွေ့ဖက်ခင်ရခဲ့တဲ့ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “ကောင်းကင်ဘုံသို့ မသွားခင် တစ်ရက်အလိုမှာ အဖေက သူ့ရဲ့မွေးကင်စသားလေးကို သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ပွေ့ဖက်ထားနိုင်မဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်”ဟု သမီးဖြစ်သူ Gracie Stone က သူမရဲ့ဖခင်အတွက် တမ်းတခြင်းစာကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Alabama ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ Christopher Stone အမည်ရှိဖခင်တစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာ ပင်ပန်းစွာ လုပ်ကိုင်ရင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သူ မစ္စတာ Christopher Stone ဟာ သူ၏အလုပ်ခွင်အတွင်းမှ ထုတ်လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်များကို ရှုရှိုက်မိသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် သူဟာ အဆုတ်ရောဂါကို ခံစားနေခဲ့ရပြီးနောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ မစ္စတာ Christopher Stone မသေဆုံးမီ တစ်ရက်အလို ၂၄ရက်နေ့မှာ ဇနီးဖြစ်သူ Brandi ဟာ သူတို့ဇနီးမောင်နှံအတွက် သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ Coy လေးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့မှာ မစ္စတာ Christopher Stone ဟာ သားဦးလေးကို ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပွေ့ဖက်ထားခဲ့ပြီး သားလေးရဲ့ခေါင်းကိုလည်း တုန်ရီနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်များဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ မစ္စတာ Christopher…
အိမ်ထောင်စု (၅၀)စာအတွက် ဆန်၊ကြက်ဥနဲ့ ဆေးဝါးတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ထူးခြား
ပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ထူးခြားကတော့မနေ့ကသြဂုတ်လ(၂)ရက်နေ့မှာအလှူလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားကတော့အခုလိုကပ်ဘေးတွေကြုံတွေ့နေရချိန်မှာလက်လုပ်လက်စားသမားအခြေခံလူတန်းစားမိသားစုတွေအဆင်ပြေစေဖို့သူတတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပါ။ မနေ့ကသြဂုတ်လ(၂)ရက်နေ့မှာသာကေတမြို့နယ်ထဲကအနှေးယာဉ်ဆရာကြီးများရဲ့အိမ်ထောင်စုအတွက်တစ်အိမ်ထောင်ကိုဆန်(၁)ပြည်၊ကြက်ဥ(၁၀)လုံး၊ပါရာစီတမောကဒ်များကိုသရုပ်ဆောင်ထူးခြားကသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်လှူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု(၅၀)စာအတွက်ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားကသူပြုလုပ်ခဲ့တဲကအလှူလေးရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေလို့တောင်းဆုပြုထားခဲ့ပါသေးတယ်။CeleZoneပရိသတ်ကြီးတွေလည်းထူးခြားရဲ့မွန်မြတ်လှတဲ့ကာလဒါနအလှူလေးကိုသာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source – Bae Gyi -Zawgyi Fontဖြင့်ဖတ်ရန်- အိမ္ေထာင္စု(၅၀)စာအတြက္ဆန္၊ၾကက္ဥနဲ႔​ေဆးဝါးေတြလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ထူးျခား ပရိသတ္ႀကီးေရပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ထူးျခားကေတာ့မေန႔ကၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာအလႉေလးတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ထူးျခားကေတာ့ အခုလိုကပ္ေဘးေတြႀကဳံေတြ႔​ေနရခ်ိန္မွာလက္လုပ္လက္စားသမား အေျခခံလူတန္းစားမိသားစုေတြအဆင္ေျပေစဖို႔သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ လႉဒါန္းေပးခဲ့တာပါ။ မေန႔က ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔မွာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ထဲက အေႏွးယာဥ္ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕အိမ္ေထာင္စုအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ဆန္ (၁) ျပည္၊ ၾကက္ဥ (၁၀) လုံး၊ ပါရာစီတေမာကဒ္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဆာင္ ထူးျခားက သူကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လိုက္လႉေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု (၅၀)စာအတြက္ကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ထူးချားကသူျပဳလုပ္ခဲ့တဲက အလွဴေလးရဲ႕ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြအားလံုး အျမန္ဆံုးက်န္းမာပါေစလို႕ ေတာင္းဆုျပဳထားခဲ့ပါေသးတယ္။ CeleZone ပရိသတ္ၾကီးေတြလည္း ထူးျခားရဲ႕ မြန္ျမတ္လွတဲ့ ကာလဒါနအလွဴေလးကို သာဓုေခၚဆိုေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ Source – Bae Gyi
သ႐ုပ္ေဆာင္ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ဇာတ္ကားေတြမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာက္ရင္းပီျပင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့မင္းသမီးပဲျဖစ္ပါတယ္၊ေဘဘီေမာင္ကေတာ့မၾကာခဏဆိုသလိုအလႉအတန္ေတြျပဳလုပ္ၿပီးဘုရားတရားလဲအလြန္းကိုင္းရွိုင္းတတ္ပါေသးတယ္၊မိသားစုမ်ားနဲ႔လဲတရားစခန္းကိုလဲမၾကာမၾကာဝင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာလဲျပည္သူေတြနဲ႔အတူအမွန္တရားဘက္ကပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာဆိုရင္လဲျပည္သူမ်ားေဘးကင္းေစဖို႔ကိုအျမဲမွာၾကားေလ့ရွိပါတယ္၊ယခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲခ်စ္စရာေမာင္အငယ္ဆုံးေလး ကိုထုတ္ႂကြားလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဘဘီေမာင္ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီးမွသားအမႀကီးပိုႏုၿပီးေခ်ာလာတယ္ဆိုပဲ၊မုန႔္ဖိုးလိုလို႔ေကာင္ေလးလာခၽြဲေန တာလားကြယ္၊က်မရဲ့ခ်စ္စရာေမာင္ေလးအငယ္ေလးဆိုၿပီးေတာ့ပုံႏွင့္တကြေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ။ Credit…M. M. H သရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့ဇာတ်ကားတွေမှ ာပါဝင်သရုပ်ဆောက်ရင်းပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်၊ဘေဘီမောင်ကတော့မကြာခဏဆို သလိုအလှူအတန်တွေပြုလုပ်ပြီးဘုရားတရားလဲအလွန်းကိုင်းရှိုင်းတတ်ပါသေးတယ်၊မိသားစုများနဲ့လဲတရားစခန်းကိုလဲမကြာမကြာဝင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဘေဘီမောင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရား ဘက်ကပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာဆိုရင်လဲပြည်သူများဘေးကင်းစေဖို့ကိုအမြဲမှာကြားလေ့ရှိပါတယ်၊ယခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲချစ်စရာမောင်အငယ်ဆုံးလေး ကိုထုတ်ကြွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီမောင်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးမှသားအမကြီးပိုနုပြီးချောလာတယ်ဆိုပဲ၊မုန့်ဖိုးလိုလို့ကောင်လေးလာချွဲနေ တာလားကွယ်၊ကျမရဲ့ချစ်စရာမောင်လေးအငယ်လေးဆိုပြီးတော့ပုံနှင့်တကွရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ Credit…M. M. H